Frequently Asked Questions | Nexus Myanmar
Nexus မှသင်ကြားပေးသောအမျိုးမျိုးသောအတန်းများ၏ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ level များကိုရှင်းပြပေးနိုင်ပါသလား?
Nexus မှာအနည်းဆုံးတန်းခွဲ(၄)ခုရှိပါတယ်။ဇန်နဝါရီမှာတစ်ခု၊ဧပြီမှာတစ်ခု၊ဇူလိုင်မှာတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အောက်တိုဘာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nexus မှာ အနည်းဆုံးတန်းခွဲ(၄)ခု ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီမှာတစ်ခု၊ ဧပြီမှာတစ်ခု၊ ဇူလိုင်မှာတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ အောက်တိုဘာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟုတ်ပါဘူး။ Nexus မှာတနလာင်္မှသောကြာအတန်းများနှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေအတန်းများနှစ်မျိုးစလုံးရှိပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေသော အချိန်အတောအတွင်းကြားရက်တွေမှာ Nexus တွင် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
Nexusတွင်နေ့ဘက် အတန်းများရှိသကဲ့သို့ ရုံးချိန်ပြင်ပအတန်းများလည်းရှိသောကြောင့် ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Nexus တွင်တစ်ဦးချင်း သင်ကြားနိုင်သော အထူးအတန်းများနှင့် သီးခြားသင်ကြားရန်လိုအပ်သော အထူးအုပ်စုဖွဲ့သင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ၄င်းအတန်းများအတွက် Nexus၏ သင်ကြားမှုဒါရိုက်တာနှင့် တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အတန်းတစ်တန်းတွင်ကန့်သတ်ထားသောကျောင်းသား အရေအတွက်ကို ပြောပြပေးပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ အတန်းတစ်တန်းတွင် ကျောင်းသား (၁၆) ယောက်သာကန့်သတ်ထားပါတယ်။
Nexus မှာသင်တန်း တက်ရောက်နိုင်ရန် ဘယ်လိုအဆင့်များ လုပ်ဆောင်ရပါသလဲ?
Nexus မှာသင်တန်းမတက်ရောက်ခင် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရပါတယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့သင်ကြားမှု အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းနှင့် အသင့်တော်ဆုံးအတန်းတွင် နေရာချထားပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးရက်တွင်အတန်းတက်ရောက်နိုင်ရန် အတွက်အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကိုတတ်နိုင်သမျအမြန်ဆုံးဖြေဆိုထားလျှင် အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများကပါ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါသလား?
ကလေးများကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရပါမည်။ သို့မှသာNexusမှ နိုင်ငံခြားသားဆရာများကကလေးနှင့် သင့်တော်သောအတန်းနှင့် သင်ရိုးကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါမည်။
သင်တန်းကြေးတွင် စာရွက်စာတမ်း၊ စာအုပ်ကြေးနှင့် စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်ကြေးများ ပါဝင်ပါတယ်။